ပြီးနောက်-အရောင်းဝန်ဆောင်မှု - Dongguan Yuechuang Automation Co. , Ltd မှ
YueChuang ၏စီးပွားရေးဒဿန: သမာဓိနှင့်လက်တွေ့, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်အကျိုးရှိစွာနှင့် win-win ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်အကျိုးရှိစွာပြီးနောက်-အရောင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူဖောက်သည်များကို, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်အောက်ပါဓမ္မကတိတော်များကိုစေ:
1. လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည့်ပစ္စည်းကိရိယာများလက်ခံမှုအစီရင်ခံစာထဲကနေအားလုံးစက်တွေနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများလက်ခံမှု၏လက်ခံမှုသည့် နေ့မှစ. ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအားဖြင့်ရောင်းချခဲ့, (လူလုပ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက် မှလွဲ. ) တစ်နှစ်အခမဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများခြုံငုံအာမခံ, ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအမျိုးမျိုးတို့ကိုပုံမှန်အသုံးပြုမှုကြောင့်ဖြစ်ပွား ပါတီ B ကိုအားဖြင့်အသက်အဘို့အပရော်ဖက်ရှင်နယ်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုပေးသည့်ပါတီများအကြားသဘောတူညီချက်သည်နှင့်အညီအစိတ်အပိုင်းများကိုဝတ်ထားအခမဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်အစားထိုးတာဝန်ယူဆောင်ရွက်သည်။
ဝယ်လိုအားလွတ်လပ်စွာ operated နှင့်ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းနိုင်ပါတယ်သည်အထိ 2. VietNin ​​ဖောက်သည်ပစ္စည်းကိရိယာများအော်ပရေတာနှင့်အင်ဂျင်နီယာပညာရှင်များသည်စစ်ဆင်ရေးအတွင်းနှင့်ဘုံစစ်ဆင်ရေးခြွင်းချက်အဘို့အလေ့ကျင့်ရေးပေးပါလိမ့်မယ်။
3. အရောင်း hotline 24 နာရီတစ်ရက်ဖွင့်လှစ်ပြီးနောက်, ငါတို့အပြုသဘောတုံ့ပြန်မည်နှင့်ပြုပြင်ခေါ်ဆိုခကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကွံဉာဏျပေး။ သငျသညျပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများအတွက် site ကိုသှားဖို့လိုအပျပါက, အချိန်ကာလသတ်မှတ်အချိန်အတိုင်း site ကိုရောက်ရှိ။
4. အာမခံကာလကုန်ဆုံးပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအမှန်တကယ်အခြေအနေနှင့်အညီပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုများကိုပေးစွမ်းနှင့်စနစ်တကျပစ္စည်းများ, ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်လုပ်အားန်ဆောင်မှုကိုအားသွင်းပါလိမ့်မယ်။
ဖောက်သည်အလုပ်သမားနှင့်အလုပ်သမားတက်လွတ်မြောက်ကူညီထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များရှင်းလင်းလွယ်ကူ, ထိရောက်မှုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်, ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးတည်ငြိမ်, စက်ရုံထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်, ဆက်စပ်ပုဂ္ဂိုလ်များ၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များလျှော့ချဖို့, အလိုအလျောက်ထိရောက်မှုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ထုတ်လုပ်ရန်စုံလင်သောနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုနှင့်ရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူဖောက်သည်များကို ဘေးကင်းနှင့်ပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောထုတ်ကုန်။ မော်တော်ကား connectors, မော်တော်ကား connectors များအတွက် Toyota ၏ Auto-စည်းဝေးယုံကြည်စိတ်ချရသည်။